Iingcebiso zokuLawula nokuziphatha
Iikhosi zeKlasi zokuNceda ukukhuthaza ukuziphatha okuhle
Njengabafundisi, kufuneka sijongane nokuziphatha kakubi okanye ukungahloniphi kubafundi bethu. Ukuqeda le ndlela, kubalulekile ukulungisa ngokukhawuleza. Indlela enkulu yokwenza oku kukusebenzisa izicwangciso ezimbalwa zokuphatha ukuziphatha eziza kukukhuthaza ukuziphatha okufanelekileyo .
Indlela efanelekileyo yokuqalisa usuku lwakho ngendlela ehlelekile kukuba nomyalezo wasasa kubafundi bakho. Njalo ekuseni, bhala umyalezo omfutshane ebhodini eliphambili elibandakanya imisebenzi esheshayo yokuba abafundi bazalise.
Le mi sebenzi emfutshane iya kugcina abafundi bexakeke kwaye, ngokukhawuleza, banokuphelisa ingxabano kunye nokuthetha ekuseni.
Kulungile kweKlasi! Lusuku oluhle namhlanje! Zama uze ubone ukuba unamagama amaninzi ongayenza ukusuka kwibinzana elithi "usuku oluhle."
Ukuncedisa ukulawula igumbi lokufundela nokuphepha ukuvalelwa kwintlungu, unike umfundi ngamnye inombolo kwinani lonyaka wesikolo . Faka inani lomfundi ngamnye ngentonga yePassicle, kwaye usebenzise le mihlathi ukukhetha abancedisi, iinkokheli zentloko okanye xa ufuna ukufownela umntu ukuba uphendule. Ezi ntonga nazo zingasetyenziswa kunye nekhadi lokuziphatha kweshadi.
Inkqubo yokuguqulwa kokuziphatha okuqhelekileyo ibonakalise ukusebenza kumagumbi okufundela . Konke okufuneka uyenze kukukwenza ukukhanya kwendlela yebhodi kwaye ubeke amagama okanye abafundi ngamanani (sebenzisa iinamba zombolo ukusuka kwimbono engenhla) kwicandelo eliluhlaza lokukhanya. Emva koko, njengoko ujonga ukuziphatha komfundi kulo lonke usuku, faka igama okanye inombolo phantsi kwecandelo elifanelekileyo.
Ngokomzekelo, ukuba umfundi uyabaphazamisa, ubanike isilumkiso baze babeke igama labo ekukhanyeni okuphuzi. Ukuba lo msebenzi uyaqhubeka, faka igama labo ekukhanyeni okubomvu kwaye ungabiza ekhaya okanye ubhale ileta kumzali. Ingqiqo elula ukuba abafundi babonakala beyiqonda, kwaye xa behamba ngokukhanya okwesibhakabhaka, oko kudla ngokwaneleyo ukujika ukuziphatha kwabo.
Kuya kubakho amaxesha xa ufumana umnxeba okanye omnye utitshala ufuna uncedo lwakho. Kodwa, ugcina njani abafundi bezolile xa behamba phambili? Kulula; yenza nje ukubheja nabo! Ukuba banokuhlala ngaphandle ngaphandle kokubacela, kwaye ngexesha lonke uxakekile ngomsebenzi wakho, ngoko bayawina. Unokubheka ixesha elide lokukhulula, i-pizza party okanye enye imivuzo emnandi.
Ukunceda ukukhuthaza ukuziphatha kakuhle kulo lonke usuku, zama ibhoksi ibhaso. Ukuba umfundi ufuna ithuba ekukhetheni kwibhokisi yebhaso ekupheleni kosuku kufuneka ... (hlalani ekukhanyeni okuluhlaza, unikezele kwimisebenzi yasekhaya, imisebenzi epheleleyo yonke imini, njl.) Ekupheleni kosuku ngalunye, unikezele abafundi ababenokuziphatha kunye / okanye bagqibe umsebenzi owenziwe.
Naliphi na i-trinket encinci
Gcina kwaye Gcina
Indlela enkulu yokukhuthaza abafundi ukuba baqhubeke nokulandela umvuzo wokuziphatha kakuhle kukusebenzisa amanqaku anamathele. Njalo xa ubona umfundi ebonisa ukuziphatha kakuhle, faka inqaku elinyamekayo kwikona yedeski. Ekupheleni kosuku, umfundi ngamnye unokuguqula amanqaku athintekayo ngomvuzo. Esi sicwangciso sisebenza kakuhle ngexesha lokutshintsha.
Mane nje ufake inqaku elincomekayo kwideski yomntu wokuqala olungele isifundo sokuphelisa ixesha lokuchitha phakathi kwezifundo.
Ufuna ulwazi olungakumbi? Zama ulawulo lwekhadi lesikhathi , okanye ufunde izixhobo ezi - 5 zokulawula abafundi abatsha .
"I-Essential 55" kwiCandelo lakho lokuQala
Iinkonzo kunye neNgcono yokusebenzisa i-Ethanol Biofuel E85
I-Essential Alison Krauss
Indlela Yokuqhuba Usuku Lokuqala LweSikolo
ULee Labrada Ngobaluleka bokutya kwexesha lokutya kwisakhiwo sakho sokwakha umzimba
7 Amasiko athandwayo awakungekho ngexesha lokubulela kuqala
Dewa mata ashita - Iimpapasho ezilula zaseJapan
Indlela yokwenza iNyoka yomlilo kaFaro
Ukuxhatshazwa kweMfazwe Yehlabathi I
Yazi i-5 Kind of Nucleotides